Tababare Guus Hiddink oo daaha ka rogay sababta uu ilaa waqtigan u safi waayay Pato! – Gool FM
Tababare Guus Hiddink oo daaha ka rogay sababta uu ilaa waqtigan u safi waayay Pato!
Byare April 2, 2016
(London) 02 Maarso 2016. Alexandre Pato ayaa labo bilood kaddib markii ugu horreysay fursasd u helay inuu kulankiisii ugu horreeyay u safto Chelsea isagoona gool ku daah furtay ciyaar ay dhawaan Blues 4-0 ugu adkaatay Aston Villa.
Macallin Guus Hiddink ayaa daaha ka rogay inay masuuliyad darro ku noqon lahayd haddii uu garoomada soo galin lahaa wiilka reer Brazil ka hor kulankii galabta.
Tababaraha reer Holland ayaa sheegay inuu ciyaarsiin karay saddex usbuuc ka hor weeraryahanka amaahda kaga yimid kooxda Corinthians ee ka dhisan Brazil.
“Wuxuu tirinayay maalmaha, albaabkana wuu gar-garaacayay,” Hiddink ayaa sidaa u sheegay BT Sport.
“Wuxuu ku jiray diyaar garoow waxaana keeni karay 14- maalmood ka hor amaba saddex usbuuc laakiin masuuliyad darro ayay noqon lahayd.
“Ma lahayn awood uu ugu dagaalamo horyaalka.
“Kani waa horyaal adag waana la dili lahaa waqtigaa.”.
Pato ayaa sidoo kale fursad u heli kara usbuuca soo socda kulanka Swansea City in lagu soo bilaabo kulankiisii ugu horreeyay ee Premier League, maadaama uu dhaawac ku maqan yahay Ramey isla markaana ganaaxan yahay Costa.
Yaa guulo badan Barcelona iyo Real Madrid kulamada El Clasico ee dhaca bishan oo kale ee Abriil?
Kooxda Barcelona oo funaanad gaar ah ku ciyaaraysa!